Posted by Tranquillus | Juun 13, 2018 | Kobcin xirfadeed
Dunida shaqadu si joogto ah ayey isu bedeshaa, tan iyo sannadkii 90 halkaas oo meesha laga tirtiro waraaqaha warshadaha ee warshadaha.
Shaqaaluhu runtii ma lahan xirfado shaqo u noqon kara shaqo kale.
Kadib shaqada shaqada ee nolosha waa la waayay si ay u noqoto mid lagama maarmaan u ah helitaanka xirfado cusub, laakiin sidoo kale si joogto ah u cusbooneysiin kuwa aan hore u haysanay.
Tani waxaa kale oo loo yaqaan "shaqo-helid" waana halkan sida loo noqdo tallaabooyin dheeraad ah oo aad ugafiican shaqada ee tallaabooyinka 3.
Aad uga sii barbardhig tababarka hore:
Si aad u noqoto mid aad iyo aad uquruxsan oo shaqadiisu ka sarayso dhammaantiis si aad uga baxdo xakamaynta waxbarashadiisa.
Marka mid ka mid ah uu gaaro tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah, way ku adkaan kartaa in uu muujiyo waxbarashadiisa ama tababarka koowaad.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in si joogta ah loo tababaro, ugu fiican dhammaan 1 ama 2.
Ha ka waaban inaad wadahadal la gasho kormeerahaaga ama la-taliyahaaga Pôle adploi haddii aad raadineyso shaqo.
Sidoo kale ka feker digikaaga (Shakhsiyan xaq u leh tababarka) kaasoo kaa caawin kara inaad tababbarto qaybta aad jeceshahay.
Ogow in loo-shaqeeyahaagu xaq u leeyahay inuu diido codsiga ugu horeeya, laakiin ma aha kan labaad.
Haddii miisaaniyadaada iyo jadwalkaagu ogolaadaan, waxaad sidoo kale bilaabi kartaa MBA.
Koorasyadan dhamaystiran waxay badanaa yihiin xeeladayaal xirfadlayaal ah kuwaas oo dhisaya shabakad dhab ah.
Qiimaynta xirfadaha waxay noqon kartaa wax fiican in la garto waxaad ogtahay iyo aadan garanaynin sida loo sameeyo.
Baro inaad horumariso xirfadahaaga:
Suuqa shaqadu si joogto ah ayuu u socdaa, waana inaan si joogto ah u joognaa taariikhda iyo xitaa in ka badan inta laga filayo.
Markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sababta xirfadahaagu ay faa'iido u yeelanayaan oo faa'iido u yeelanayaan ururka aad ka shaqaynayso ama aad rabto inaad shaqeyso.
Haddii booska aad rabto inaad ubaahantahay xirfado gaar ah, ha ka waaban inaad aqoonsatid oo aad horumarisid si aad fursadahaaga ugu saarto dhinacaaga si aad u hesho shaqada.
Maskaxda ku hay in ganacsiyada maanta ay rabaan la qabsasho.
Abuuri shabakad si aad u horumariso xirfadahaaga:
Waad ku faraxsan tahay sida ay u muuqan karto, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad horumariso xirfadahaaga xiriirintaada.
Markaad ka dhexjirto shabakadaha bulshada, waxaad awoodi doontaa inaad la xiriirto oo aad la xiriirto dadka ka shaqeynaya qayb ka mid ah waxqabadyo la mid ah kuwaaga.
Ka fiirso shabakadaada xirfadeed, u tag dhacdooyinka ay abaabulaan shirkadaha aad xiiseyneyso oo aad kala hadashid wada-xaajoodyada muhiimka ah adigoon ilaawin inaad ka dhex-bixisid kaararka ganacsiga.
In yar, kala hadal naftaada.
Sidee loo noqon karaa shaqaale badan oo xirfad leh August 23rd, 2018Tranquillus
horeNidaamka caafimaadka Faransiiska: ilaalinta, kharashyada, taageerada
socdaSidee si guul leh loogu dhex gali karaa koox cusub?